Xanuunada dhimirka | Suomen Mielenterveysseura
+ Xanuunada dhimirka
Nafsadda qofka bini’aadamka waa mid isla bedbedesha xaaladaha iyo waayo-aragnimada kala duwan ee nolosha awgeed. Maskaxda caafimaadka qabta waa tan aasaaska u ah bedqabka ama caafimaad qabka qofka, waxayna ka caawisaa u adkaysashada xilliyada dhibaatada, waxay adkeysaa awoodiisa waxqabad ee isbedbedelka xaaladaha, waxay kaloo ka caawisaa u adkaysiga xaaladaha adag ee uu la kulmo qofku noloshiisa sida geerida qoyska. Ururka Suomen Mielenterveysseura wuxuu xoogga saaraa isku xidhka dadka iyo deegaanka: miyirqabku waa awood wax soo saar oo ka dhalata inta u dhexeeysa nolosha qofka iyo xaaladaha nolosha deegaanka.
Caafimaadka dhimirka waxayaabo badan ayaa saameyn ku yeesha, sida caawimaad aad ka hesho dhanka bulshada ama qoyska iyo saaxiibada kuu dhowdhow, caafimaad jidh ahaaneed iyo xidhiidhadii hore ee wanaagsanaa (barbaarinta deegaanka). Saameynta bulshada, sida inaad waxbarato, shaqaysato, iyo qiimmaha iyo qadarinta bulshada dhexdeeda, sida fahmidda kala duwanaanshaha dadka, dhammaan kuwaas oo idil waxay muhiim u yihiin kor u qaadida caafimaadka dhimirka.
Caafimaadka dhimirku wuxuu ka kooban yahay arrimo badan, oo haddii aan ka fekerno ahaan karta dhammaan waxyaabaha la xidhiidha nolosha qofka. Caafimaadka dhimirka waxaa kor u qaadi kara tusaale ahaan in uu qofku isugu kalsoonaado si wanaagsan oo ku filan, deegaan ammaan ah iyo in uu aqoon u leeyahay xal ka gaadhista dhibaatooyinka. Caafimaadka dhimirka waxaa culeys ku ah tusaale ahaan takooridda, faqriga, furniinka, geerida iyo xidhiidhada dadka ee aan wanaagsaneyn. Haddii culeysku aad u sii kordho, wuxuu keeni karaa xanuunka dhimirka.
Ogaanshaha xanuunka dhimirka ma aha mid fudud. Inta badan calaamadaha isku qasnaanta waa kuwo laga gudbo. Caafimaadka dhimirka waxaa culeys ku ah marxalada kala duwan ee nolosha midba midda kale ha ka sii darnaatee, xanuunka maskaxda ee aan joogtada aheyn iyo marxaladaha adag ee noloshu waa mid caadi ah. Haddaba markay maskaxdu soo noqoto, waxaa muhiim ah in la fahmo dhibka si loo helo daryeel ku habboon.
Xarumaha caafimaadku waxay u kala saaraan xanuunnada dhimirka heerar, iyadoo loo eegayo hadba intuu le’eg yahay calaamadihiisa iyo darnaantiisa. Xanuunada culus ee dhimirku waa kuwo keeni kara waxqabad la’aan buuxda. Qofka la il daran xanuunada culus ee dhimirka ee isla markaana hela daryeel fiican wuxuu ku nolaan karaa nolol iska caadi ah.